FILUUN BOORTAAN TAATU! -
Filuun boortaa mitii
Dabbasaan tan abbaatii
Murtiin mataa keeti.
Tan sabaatii mitii
Kanniisa hin filadhu!
Isas hin jaaladhu!
Ofumaaf wal yaamtee,
Goda galtee nyaatte.
Hedduu nu illeessitee
Waan nu goote beeytaa
Amma afaan bantee
na filadhu jattaa?
Du’a na afeertee,
Ka munneen idditee,
Summii nattii nayxeen
Ija koo jaamsitee,
Ka dire dagatus
Maal keettu dagatee
Nan dagadhe seetee?
Lamuu na kajeeltee…….???
Filuun boortaan taatuu
Kan filamuu qabu
hunduu haa hubatu.
Harkaat harka dhiqaa
Xurii sirraa haqaa
Dura filuun harkaa,
Harkakoo kan mirgaa
Roorroos narraa dhoorkaa,
Borullee naaf ragaa.
Harka ittiin qabadhu,
Filtuu ittiin filadhu,
Waafa samii dhaabee
Filtuu itti darbee
Kan qabatee laalu
Isaatu naan jaalaa
Kanaaf harkan fila!
Kana tahuu baatee
Ulee fi gaashiree, du’aaf yoo dharraate,
Filadhu Wayyaanee,tan lafa buqqiftee…
Waardiyaa si muddee,qabeenyakee saamte.
Tags filmaata najiib walaloo
Previous Landslide likely for Ethiopia’s long-time rulers
Next Talk to Al Jazeera – Hailemariam Desalegn: Democracy ‘not only an election’